Iminyaka eli-12 kuyilo lobungcali- iNBC Electronic Technologic Co, Ltd.
Ukufumana isisombululo seminyaka eliqela kwinkonzo yamanye amazwe
Ukusuka kwi-HOUD esekwe, hlala u-orient-oriental, unyanzelisa umgangatho njengengcambu, uphucule kwaye uqhubeke ngokuqhubekekayo, phantsi kweminyaka emininzi yokusebenza nzima komqeshwa, inkampani yamanye amazwe iyazamkela iimveliso zethu, qhubeka ukhula kwinqanaba lamanani aphindwe kabini ngonyaka.
Ukubonelela ngesisombululo kunye nenkonzo kuninzi lweprimiyamu yohlobo lwangoku okwangoku, kwisinxibelelanisi: I-State Grid Corporation yase-China, i-Eaton, i-Delta, i-HuaWei, i-Emerson, i-Philips, i-TCL njlnjl. .
Sithatha inxaxheba kuyilo loMthengi, sibonelela ngombono wobuchule kunye namava, okwangoku impendulo esebenzayo, ukumilisela ukungqinisisa kwezimvo ezahlukeneyo zabathengi, ukubonelela ngemveliso esemgangathweni ophezulu.
Uphawu oludumileyo kushishino, patent30 +, kwishishini lobuchwephesha be-Hi-tech
Ngomsindo unika isisombululo esiphakamileyo sokudibanisa kunye nesisombululo se-electro-acoustic, uhloniphe ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, uphinde unake ingqalelo kwitekhnoloji entsha, ubhalise uphawu lworhwebo lweemveliso olusekwe: ANEN, ngawo wonke umsebenzi osebenza nzima, kumashumi eminyaka asaphuhlayo, umthengi uyalwamkela uphawu lwethu ngokuthe ngcembe , Isicelo samandla e-UPS, iziko ledatha kunye neseva, amandla ombane, isikhululo sonxibelelwano, isixhobo esizisebenzelayo, isixhobo sonyango, isixhobo sombane, ukugcwala komzila kaloliwe, ezemoto kunye nokuhanjiswa kwezinto, ukhuseleko lomoya, ezemigodi, ezomculo kunye neefowuni. Ukuza kuthi ga ngoku, inkampani ephethe ilungelo elilodwa lomenzi 40+, uzukisiwe yinkampani yesayensi ye-Hi-tech kunye nenkampani yetekhnoloji. Ngenkxaso enkulu yomthengi ovela kumashishini ahlukeneyo, wonke umsebenzi uya kuba njalonjalo, avelise ngokuqhubekayo, ingxelo endala kunye nomthengi omtsha ngobubele obukhulu.
Ifektri izixhobo eziphambili zokuvelisa kunye neworkshop zala maxesha, uyilo kunye nenkqubo yokwenza izixhobo.
Ukuza kuthi ga ngoku, ekuphuhliseni, sinika uthotho lwesisombululo kubathengi: Uyilo-> Iisampulu (ukuprinta kwe3D) -> ukuvavanywa kweesampulu / ukuqinisekiswa-> uyilo lwezixhobo-> ukuphuhlisa-> imveliso yobuninzi. Ngokubhekisele kwimowudi yokuqhubekeka, sinokubonelela ngenaliti, ukunyathela, ukolula, i-CNC, iMIM njl, sinamava atyebileyo kwisihlanganisi esikhoyo ngoku, isiphelo sendlela kunye nezixhobo ze-electro-acoustic. Inkampani ephethe iworkshop yesingxobo sombane, sinokukuzisela amava angcono, ngenxa yamava eminyaka kuyilo lwemveliso kunye nokwenza imveliso yohlobo lweprimiyamu yamanye amazwe.